Askar badan oo Muqdisho yimid & Qorsho ay wado Dowlada. |
Askar badan oo Muqdisho yimid & Qorsho ay wado Dowlada.
Burundi ayaa Soomaaliya u soo dirtay ciidamo kuwaas oo ka mid ah howlgalka nabad ilaalinta ee AMISOM, ciidamadan ayaa bedelaya kuwa kale ee horay uga baxay Soomaaliya kuwaa oo joogay dalka muddo Hal sano ah sida uu sheegay afhayeen u hadlay dowladda Burundi.
Xaaladda dalka Soomaaliya ayaa xiligaas ahayd mid aad u xun iyadoo ALshabab ay xataa awood u lahayd inay beegsadaan diyaaradaha adeegsada garoonka Muqdisho laakiin hadda qatartaas meesha waa ka baxday .
Waxaa jira ciidamo gaar ah oo loo sameeyey badda waxa sidoo kale caadi kusoo noqday isusocodka gaadiidka iyadoo dhammaan horumaradaas ay kaalin weyn ka qaateen ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM sidaana waxaa yiri afhayeenka ciidamada dalka Burundi Colonel Gaspard Baratuza.